WED (သို့) JUNE5တွင် ကျရောက်ခဲ့ သော World Environment Day | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » WED (သို့) JUNE5တွင် ကျရောက်ခဲ့ သော World Environment Day
WED (သို့) JUNE5တွင် ကျရောက်ခဲ့ သော World Environment Day
Posted by we R one on Jun 27, 2011 in Creative Writing |7comments
June-5 ရက်နေ့ မနက်6နာရီ အချိန်. နိုးစက် အသံကြောင်းနိုးလာခဲ့တယ်။ အဲဒီ နေ့ က ကမ္ဘာသဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် နေ့ ။ Myanmar Youth In Action က အသိတစ်ယောက် က အဲဒီနေ့ ကွန်းခြံကုန်း မှာ သစ်ပင်စိုက်ပွဲရှိတယ် လိုက်မလား ဆိုတော့စိတ်ပါဝင်စားစွာ လိုက်မယ်ဆိုပြီပြောခဲတယ်။ တကယ်လည်း အိပ်ရာ က ထမယ် ကြံ တော့ မသွားချင်သေးဘူး။6နာ၇ီပဲ ရှိသေးတယ် လေ။ ကိုယ် တကယ် နိုးမယ့် အချိန်က နောက် 1 နာရီခွဲတောင် လိုသေးတာ။ ဒါပေမဲ့ လက်မယ်ဆိုပြီးစာရင် ပေးတားတာ မလိုက်ရင်လည်း မျက်နှာပျက်မယ် ၊ အဆောင်က မသွားခင် သုံးရက် လောက် ကတည်း က လိုက်ပြီးစည်းရုံးခံ ရတဲ့ သူတွေ ဆီမှာလည်း မေတ္တာ ပို့ခံရမှာကြောက်လို့ ရယ်ကြောင့် မှိတ်နေတဲ့ မျက်စိ ကိုအတင်းဖွင့်ပြီး ရေသွားချိုးလိုက်တယ်။ ကိုယ်ကသာ မနိုးသေးတာ နောက်က လိုက်မယ့် သူတွေ က အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးပြီ။
ရေမိုးချိုး ၊ ပြင်ဆင်ပြီးတော့7နာ၇ီဖြစ်နေပြီ။ 7:30 ကို ဒဂုံစင်တာရှေ့ကို အရောက်သွားရမှာဆိုတော့ သူငယ်ချင်းဝယ်လာပေးတဲ့ ကောင်းညှင်းပေါင်း ကိုတောင် ကားပေါ်ရောက်မှစားရတယ်။ အဲဒါ နဲ ကျွန်မ ဆို့ သူငယ်ချင်6းယောက် 7:30 အချိန်အတိအကျ မှာ ဒဂုံစင်တာ ရှေ့ကို ရောက်ခဲ့ လေသတည်ပေါ့။
ရောက်နေတဲ့ လူတွေက အားလုံး လူငယ်တွေ ချည်းပဲ။ ၀ဲ ကြည့်လိုက်တော့ တစ်ယောက်မှ သိတဲ့သူမပါ။ လိုက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ MYIA က အသိက လည်း တစ်ခါမှ မမြင်ဖူး အွန်လိုင်မှာ ပဲ စကားပြောဖူးတာ။ ဟော တွေ့ပါပြီ.တစ်ယောက် ကျွန်မ တို့ အလုပ်က ထွက်သွားတဲ့ အစ်မ တစ်ယောက်။ သူ့အနား သွားကပ်ပြီး အစ်မရယ် ဒီနေ့ အကျွေးအမွေးလေး ပါလားလို့ မေးတော့ ထမင်းကြော် ကျွေးမယ်လို့ပြောတော့ လိုက်ရတာ အားတက်သွားတယ်။ :D
မနက် 83း0 မှာ ကားစထွက်ပါတယ်။ ကျွန်မ ထင်ထားတာ က ကွန်းခြံကုန်းဆိုရင် သံလျှင် ဘက် က သွားရတယ် ထင်နေတာ။ လက်စ သတ်တော့ လှိုင်သာယာ ဘက်က သွားတာကို။ :D
တွံတေး တံတားပေါ် က ဖြတ်သန်းစဉ်
ဒီလို ဆိုင်းဘူတ်လေးတွေလည်း အများကြီးတွေ့ခဲ့ ရတယ်
ကွန်းခြံကုန်း မြို့ ကို အရင်ရောက်ပါတယ်။ အဲဒီမြို့ပေါ် က ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာခဏ ၀င်ပါတယ်။ ပါလာတဲ့ ပစ္စည်းလေး တွေ လှူကြ တာပေါ့။
ဟော ရောက်ပါပြီ. ကျွန်မ တို့ သစ်ပင် စိုက်မယ့် ရွာ နာမည် က ကျခတ် ရွာ တဲ့ ။ အိမ်ခြေ 60 လောက်ရှိပါတယ်။ တစ်ရွာလုံး ကရင် တွေ ချည်းပါပဲ။သဘောလည်း တော်တော် လည်း သဘော ကောင်းကြတယ်။
ပျော်ပျော်ပါးပါး သစ်ပင် စိုက်ကြ စဉ်
ရွာရဲ့ လမ်းမ တလျှောက်မှာ စိုက်ကြတာ။ ရွာသား တွေကလည်း ကြိုပြီးလုပ်ပေးထားကြတယ်ရှင့်။ သစ်ပင် စိုက်ရတာ ပျော်စရာ ကြီး။ ကျွန်မ က5ပင်တောင် စိုက်ခဲ့တာ။
သစ်ပင်တွေ စိုက်ပြီးရော ဘုန်းကြီးကျောင်ကို သွားပြီထမင်းစားကြတယ်။ ဗိုက်ဆာနေလို့လား မသိဘူး တော်တော် စားလို့ကောင်းပါတယ်။ စားသောက်ခြင်းအစီအစဉ် ပြီးသွားတဲ့ အခါ ဟောပြောပွဲစပါတယ်။ Htoo Foundation က တာဝန်ရှိတဲ့ သူက သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်း ၊ MYIA က တာဝန်ရှိတဲ့ သူ က သစ်ပင်စိုက်ရ ခြင်းအကြောင်း ပြောပြကြတယ်။ Myanmar Story Teller အဖွဲ ကလည်း သစ်ပင်း စိုက်ခြင်းအကြောင်းကို ပုံပြင်သရုပ်ဖော်ပြီးပြောပြသွားပါတယ် ။ နောက်ဆုံးမှာ MYIA က စပ်ထား တဲ့ သီချင်းလေးနဲ အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။
ရန်ကုန်ပြန်လာတဲ့ လမ်းတစ်လျှောက်မှာ သီချင်းတွေ ဆိုလိုက်၊ မိုက်ဆက်လိုက်နဲ ပျော်စရာကြီးပါ။
အခုလည်း သစ်ပင်စိုက်ထားထာ 1 လနီးပါးရှိနေပြီးဆိုတော့ ကိုယ်စိုက်ထားတဲ့ အပင်လေး တွေ ဘယ်လို အခြေ အနေ ရှိနေပြီလဲ 3-Jul-2011 မှာ သွားကြည့် ဖို့အတွက် MYIA က မေလ် ရထားတယ်။
ဒီpost ကို edit လုပ်ချင်လို့ .. ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ .. ပြောပြ ပေးကြပါရှင်။
weRone ရေ- ကိုယ့်ပိုစ့်ရဲ့ အောက်ဆုံးမှာ Edit this page ရှိတယ်လေ။ အဲဒီကနေ သွားပြင်လို့ ရတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် Side Admin ကနေ တဆင့် ကိုယ့်ပိုစ့်ကို ပြန်သွားပြီး Edit လုပ်လို့ရပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မမရယ် အခု edit လုပ်ပြီသွား ပါပြီး..
တလောက မေးလ်ထဲဝင်လာသေးတယ် … သစ်ပင်စိုက်ဖို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ လူရှိလျှင် အတူ စိုက်ဖို့ပေါ့… ။
သစ်ပင်စိုက်တာ ပျော်စရာကောင်းပေမဲ့လေ… ရွံ့တွေ မြေကြီးတွေ မကိုင်ချင်းဘူး… အထူးသဖြင့်ခုလို မိုးရာသီမှာ နွားချေးနဲ့ တီကောင်ကို ကြောက်တယ်… ။ ကျွတ်တွေ မျှော့တွေလည်းကြောက်တော့ … ၀င်လာတဲ့မေးလ်းကို လစ်လျှူ ရှူပြီး … ပိတ်ရက်မှာ နေ့ဝက်ထိ အိပ်ပစ်လိုက်တယ် ။
အစတုန်းကတော့ ရွံတွေ မြေကြီးတွေ ကို မကိုင်ချင်တာပေါ့ အမှန်ပဲ တစ်ပင်လောက် စိုက်ပြီးရော.. အဲဒီ မကိုင်ချင်တဲ့စိတ်တွေ ဘယ်ရောက်သွားမှန်တောင်မသိလိုက်ဘူး.. နောက်ပြီးရွာသားတွေ ကလည်း စိုက်ရမယ့်နေရာ ကို သေချာ လုပ်ပေးထားပါတယ်။ လက်အိပ်ဝတ်ပြီး စိုက်လို့ ရပါတယ်။ လက်အိပ်ဝတ်ထားရင် မြေကြီးကို တိုက်ရိုက် ထိစရာ မလိုတော့ ဘူးပေါ့..
ပုံထဲက မမ ၂ယောက်ထဲက ဘယ်သူလဲ..
မဆူးရေ.. အဲဒီ မမ နှစ်ယောက် က တစ်ယောက်မှ ကျွန်မ မဟုတ်ပါဘူး။ :D သစ်ပင်လိုက် စိုက်ကြတဲ ကျွန်မ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပါ။